Raw Tadalafil Powder (171596-29-5) Ndị na-emepụta ihe & ndị na - eweta ya - orylọ ọrụ
A na-eji Raw Tadalafil uzuzu n'okpuru aha Cialis iji mee ihe na-adịghị mma (adịghị ike) na ihe mgbaàmà nke ezigbo prostatic ………
ikike: 1190kg / ọnwa
Tadalafil uzuzu vidiyo
Product Name Tadalafil uzuzu
Chemical Aha (6R,12aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
Klaasị ọgwụ ọjọọ PAH, PDE-5 Ndị na-eme nchọpụta; Ndị na-eme ihe ntanetị bụ 5 Enzyme
molekụla Fnhazi C22H19N3O4
Nkịtị Monoisotopic 389.138 g / mol
Mgbu Point 298-300 ° C
Ọkara Ndụ nke Ndụ 17.5 awa
Sume Soluble na DMSO (78 mg / ml na 25 Celsius C), methanol, mmiri (<1 mg / ml na 25 Celsius C), dichloromethane, na ethanol (<1 mg / ml na 25 Celsius C)
Sịkwa akwa Tigwe Chekwaa na ụlọ okpomọkụ dị n’etiti 59 Celsius na 86 Celsius (15 Celsius na 30 Celsius). Echekwala ọgwụ a na mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri.
Tadalafil Antinye Raw Tadalafil powder tablets, Sweighọm Mmekọahụ, Mmekọahụ kọfị, wdg.
Tadalafil, (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6, 3,4] pyrido [1,4-b] indole-5-dione (Cialis), bụ ụdị ihe mgbochi PDE5 na ọgwụ e ji ọnụ ekwu. Ọ bụ ihe nrụpụta b-carboline na ọ dị iche na vardenafil (Levitraw) na sildenafil (Viagraw), ha abụọ bụ ndị na-eme ihe PDE171596 dabere na ngwongwo pyrimidine gwakọtara. Tadalafil uzuzu (CAS 29-5-2003) na-eme ka ọbara na-asọba n'ime corpus cavernosum site na ime ka akwara ọbara dị jụụ, nke a na-emekwa ka mmadụ nwee ike iru ụlọ. United States (US) Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) kwadoro Tadalafil ntụ ntụ na XNUMX maka ọgwụgwọ nke nkwụsịtụ (ED), wee zụọ ahịa n'ụwa niile n'okpuru aha Cialis. A na-ejikwa ya ịgwọ ọbara mgbali elu na ọbara ọbara na-adịghị mma, ọnọdụ nke prostate gland na-ebuwanye ibu, na-akpata nsogbu na urination.
Njirimara nke ọgwụ Tadalafil bụ ogologo ndụ (17.5 awa) ma e jiri ya tụnyere Viagra na Levitra (awa 4-5). Ọkara ndụ nke a toro ogologo na-ebute ogologo oge iji rụọ ọrụ, ọ bụkwa na akụkụ ya, kpatara aha Cialis nke "mkpụrụ ọgwụ izu ụka." Ogologo ndụ a bụkwa ihe ndabere nke nyocha ugbu a maka iji tadalafil mee ihe na ọbara mgbali elu dị ka ọgwụgwọ otu ugboro kwa ụbọchị.
Akwụsị Penile n'oge enwere mmekọahụ na-enweta site na ntụrụndụ nke akwara penile na akwara corpus cavernosal dị nro, na-eme ka ọbara gbanye ọbara ahụ. Ntụrụndụ a na-enye ohere ịbawanye ọbara site na arteries penile, mgbe ọbara a jupụtara ụlọ abụọ n'ime penis a na-akpọ corpora cavernosa. Dika ulo ndi juputa na obara, ihe omuma ahu na-eto. Emeputa na - ejedebe mgbe nkwekorita akwara na ọbara a chịkọtara nwere ike ịpụta site na veins penile.
Nzaghachi a na-agbasa site na ntọhapụ nke nitric oxide (NO) site na njedebe akwara na mkpụrụ ndụ endothelial, nke na-akpali njikọ nke cGMP na sel ndị nwere ahụ ike na-edozi ahụ wee na-achịkwa ọnya na mkpịsị aka nke arịa ọbara na-ebu ọbara na site na amụ. GMP Cyclic na-eme ka ahụ ike dị jụụ na mmụba ọbara na-abanye n'ime corpus cavernosum, ma na-eweda ya cGMP kpọmkwem ụdị phosphodiesterase 5 (PDE5) na corpus cavernosum nke dị na amụ. Tadalafil na-egbochi PDE5 ma si otú ahụ na-eme ka ọ dịkwuo mma site na ịba ụba nke cGMP dị. Tadalafil na-akwụsị PDE5 site na nbibi cGMP wee mekwuo cGMP dịnụ iji nweta ọrụ ma mee ka nrụpụta ahụ dị ogologo.
Agbanyeghị, dịka ọkara ndụ Tadalafil dị mkpụmkpụ, mmetụta ya ga-akwụsị n'oge ụbọchị 2 na-eme ka PDE5 laghachi na ahụike mmekọahụ gị - ka njọ. Nwere ike iwepụta ogologo oge iji nweta mmetụta ịchọrọ, dịka obere Cialis dị ala 4-5 ụbọchị maka ụbọchị 4-5.
Mmiri ọbara mgbali elu nke ọbara
Norepinephrine na-egbochi blocker
Onye na-anabata onye na-anabata ihe mgbochi
Na-atụ aro Tadalafil ntụ ntụ Dosage
Cialis na-abịa na edo edo, ihe mkpuchi ihe nkiri na nke almọnd na 5, 10 na 20 milligram (mg). Startingkpụrụ mmalite nke Cialis ntụ ntụ ka eji mee ihe dị ka ọ dị mkpa n'ọtụtụ ndị ọrịa bụ 10 mg, weere tupu ịmalite inwe mmekọahụ.
Ntinye mbụ bụ 10 milligrams (mg) ọ dịkarịa ala 30 nkeji tupu arụ ọrụ mmekọahụ. Ụdị ahụ nwere ike ịbawanye na 20 mg ma ọ bụ belata na 5 mg, dabere na nrụpụta nke onye ọ bụla na nnabata. Ma, kachasị bụ 20 mg dị ka otu mkpụrụ. Ihe kachasị atụ aro dosing ugboro bụ otu ugboro kwa ụbọchị na ọtụtụ ndị ọrịa. o kwesŽghŽ ŽghaghŽ ihe karŽrŽ otù] z] na oge 24. Ndị ọrịa na-atụ anya inwe mmekọahụ ma ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'izu nwere ike iji ọgwụ 5 mg kwa ụbọchị, nke a nwere ike belata na 2.5 mg otu ugboro kwa ụbọchị, dabere na mmeghachi omume onye ọ bụla.
E gosipụtara ntụ ntụ Cialis maka iji ya mee ihe iji mee ka ọ dịkwuo mma ma e jiri ya tụnyere placebo ruo elekere 36 na-esote dosing. Ya mere, mgbe ị na-enye ndị ọrịa ndụmọdụ gbasara iji Cialis ntụ ntụ mee ihe, ekwesịrị iburu nke a n'uche.
Ọ dị mma ịmara na mgbatị ahụ agaghị apụta nanị site na ị .ụ ọgwụ. Ekwekwala ka Cialis maka nsị ma ọ bụrụ na ị na-ewere Adcirca maka ọbara mgbali elu. N'akụkụ, Tadalafil maka dysfunction bụ naanị maka ndị okenye dị afọ 18 afọ na karịa.
Ada Tadalafil uzuzu nwere ike inye aka mee ka akwara dị na prostate na eriri afọ gị. Nke a nwere ike inye aka melite mgbaàmà BPH gị.
♦ Iji meziwanye mgbaàmà ED, tadalafil uzuzu na-enyere aka ịbawanye ọbara na amụ. Nke a nwere ike inyere gị aka inweta ma debe ụlọ. Maka tadalafil uzuzu iji nyere gi aka inwe ulo, ikwesiri inwe mmekorita nke nwoke.
Maka PAH, tadalafil uzuzu na-arụ ọrụ iji meziwanye ikike ịme ahụ site n'ime ka arịa ọbara dị na ngụgụ gị dị jụụ. Nke a na - eme ka ọbara gbasaa.
Tinyere mmetụta ndị dị ya mkpa, ọgwụ nwere ike ịkpata mmetụta ndị a na-achọghị. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mmetụta ndị a nile nwere ike ime, ọ bụrụ na ha emee, ha nwere ike ịchọ nlekọta ahụ ike. Biko lelee mmetụta ndị na-esonụ nke tadalafil ntụ ntụ:
Mmetụta ndị na-emekarị
▪ iwe iwe
▪ ihe mgbu
▪ ahụ ike
▪ akpụkpọ anụ (ọbara ọbara ọbara)
▪ na-agbaji ma ọ bụ na-agba agba
▪ afọ ọsịsa
Ọ bụ obere mmetụta dị egwu
Mgbatị ogologo oge nke nwere ike iduba na mkparịta ụka, nsogbu ọhụụ, na ụda ntị.
Ọ bụrụ na mmetụta ndị a dị nwayọọ, ha nwere ike ịga n'ime ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu abụọ. Ọ bụrụ na ha ka njọ ma ọ bụ na ha adịghị aga, gwa dọkịta gị ma ọ bụ onye na-enye ọgwụ.
Ndị nwere ọnọdụ ndị a ekwesịghị ikwe Cialis ntụ ntụ ọ gwụla ma dọkịta kwadoro:
▲Nsogbu obi nke obi, angina, ma ọ bụ ọrịa obi ọ bụla
▲Ọkwa elu ma ọ bụ ọbara mgbali elu
▲Mkpụrụ obi obi nkasi obi ma ọ bụ ọrịa strok n'ime ọnwa 6 ikpeazụ, ma ọ bụ nchịkwa myocardial n'ime ọnwa 3 ikpeazụ
▲Ọrịa Sickle cell, otutu myeloma, hemophilia, leukemia, ma ọ bụ ọrịa ọbara ọzọ
▲Umeji ma obu akụrụ
▲Nrụrụ nrụrụ nke amụ amụ, dịka ọrịa Peyronie
▲Ahụike ọ bụla a gwara ha ka ha ghara inwe mmekọahụ
Mgbe ị na-eji tadalafil, enwere ọgwụ ndị ọzọ nwere ike imetụta ọgwụ, nke nwere ike ibute mmetụta ndị dị na ya. Mkparịta ụka ọgwụ ọjọọ nwere ike ịgbanwe otú ọgwụ gị si arụ ọrụ ma ọ bụ mekwuo ohere ị nwere maka mmetụta dị njọ.
Tadalafil nwere mmetụta dị mma nke na-eme ka mbelata ọbara na-akpata. Tadalafil nwere ike ime ka ọbara mgbali elu gị dị oké njọ mgbe ejiri ya na nitrates, nke nwere ike iduga nrịanwụ, ịda mbà, ma ọ bụ obere nkụchi obi ma ọ bụ ọrịa strok. Ejila tadalafil mee ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a: ụfọdụ ọgwụ eji agwọ ọrịa obi / angina (nitrates dị ka nitroglycerin, isosorbide), ọgwụ ndị a na-akpọ "poppers" nwere amyl ma ọ bụ butyl nitrite.
Ọ bụrụ na ị na-anara ọgwụ mkpịsị aka mkpụrụ (dịka doxazosin, tamsulosin) iji mesoo prostate / BPH ma ọ bụ ọbara mgbali elu, ọbara mgbali elu gị nwere ike ịdalata nke nwere ike iduga nro ma ọ bụ nkwụsị. Dọkịta gị nwere ike ịmalite ịgwọ ọrịa na ụda tadalafil ma ọ bụ gbanwee ọgwụ mkpịsị aka nke mkpụrụ gị ka ị belata ihe ize ndụ nke ọbara mgbali elu.
N'ime ihe omumu banyere ogwu, akuko banyere nzaghachi di omimi rue 36 h na-eso nchikota ogwu. Tadalafil na-ejikarị metabolized n'ime imeju site na CYP3A4 n'ime ndị na-adịghị arụ ọrụ megide PDE5 ma wepụta ihe kachasị dị ka metabolites na feces na mmamịrị. Ihe ndị dị ka iri nri na ị alcoholụbiga mmanya ókè, afọ ọnụnọ, ọnụnọ nke ọrịa shuga, na ọrịa ịba ọcha n'anya na-adịghị ala ala. Ihe kachasị emetụta ọgwụ ọjọọ bụ isi ọwụwa, mgbu azụ, dyspepsia, na myalgia. Na usoro onunu ogwu nke 10 na 20, Tadalafil enweghị mmetụta dị ukwuu na ọbara mgbali elu na ọnụego obi ma ọ dịghị ebute mgbakwunye oge nke infarction myocardial. Achọpụtawo akụkọ ọjọọ nke ogologo oge dị elu karịa 4 h na priapism site na iji tadalafil. Ọ bụrụ na a na - elebara Priapism anya nke ọma, ọ nwere ike ibute nsị anụ ahụ na - agbanwe agbanwe. A na-adụ ndị ọrịa nwere mgbatị dị ogologo karịa 4 h ka ha chọọ nlekọta ahụike mberede. N'ime ndị ọrịa mamịrị, mmụba nke ọrụ site na tadalafil bụ na agbanyeghị ụdị ọrịa shuga na ụdị ọgwụgwọ ọrịa shuga.
Ọgwụ ndị ọzọ nwere ike imetụta mwepụ nke tadalafil si n'ahụ gị, nke nwere ike imetụta otú tadalafil si arụ ọrụ. Ihe ntinye gunyere antigide (dịka heraconazole, ketoconazole), ọgwụ nje macrolide (dịka clarithromycin, erythromycin), ndị na-egbochi nje HIV (dịka fosamprenavir, ritonavir), ịba ọcha n'anya C virus protehibit (dịka boceprevir, telaprevir), rifampin, n'etiti ndị ọzọ .
Ejila ọgwụ a na ngwaahịa ọ bụla ọzọ nke nwere tadalafil ma ọ bụ ọgwụ ndị ọzọ yiri ya iji mee ihe maka dysfunction-ED ma ọ bụ ọbara mgbali (dịka sildenafil, vardenafil).
N'ihe gbasara tadalafil na ọgwụ ndị ọzọ ka nwere nnukwu ihe, ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọgwụ na tadalafil (CAS 171596-29-5), buru ụzọ cheta dọkịta gị na ọ ga-enye gị ọkachamara ọkachamara na a pụrụ ịdabere na ya.
Tadalafil uzuzu, sildenafil uzuzu, na vardenafil uzuzu nile na-eme site na igbochi PDE5 enzyme, ma ọgwụ ndị a na-egbochi PDE enzymes 6, 1, na 11 n'ọtụtụ dịgasị iche. Dịka ọmụmaatụ, Sildenafil na vardenafil na-egbochi PDE6, enzyme dị na anya, karịa tadalafil. Fọdụ ndị ọrụ sildenafil na-ahụ nsị na-acha uhie uhie ma nwee mmetụta dị elu nke ìhè n'ihi mgbochi PDE6. E wezụga nke ahụ, Sildenafil na vardenafil na-egbochi PDE1 karịa tadalafil. PDE1 dị na ụbụrụ, obi, na akwara na-enwe ezigbo vascular. A na-eche na igbochi PDE1 site na sildenafil na vardenafil na-eduga na vasodilation, flushing, na tachycardia.
E jiri ya tụnyere arụmọrụ na PDE6 na PDE1, tadalafil rụrụ ọrụ na PDE11. A na - egosipụta PDE11 n'ikike skeletal, prostate, imeju, akụrụ, pituitary gland, na testes. Otú ọ dị, a naghị ama mmetụta ndị dị n'ahụ ahụ nke na-egbochi PDE11.